Tsaho momba ny hoe “vaksiny fiarovana ny pesta” : savorovoro nanerana ny sekoly maro, omaly | NewsMada
Tsaho momba ny hoe “vaksiny fiarovana ny pesta” : savorovoro nanerana ny sekoly maro, omaly
Na ny zandarimariam-pirenena, ny minisiteran’ny Fahasalamana, ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena, samy namoaka fanambarana nandiso ny tsaho miely amin’ny hoe fisian’ny andian’olona manao vaksiny fiarovana amin’ny pesta. Tsaho nampisavorovoro, teto an-dRenivohitra sy ny manodidina, nanomboka ny talata teo hatry ny omaly.
Nanomboka ny talata lasa teo niely ny tsaho tamin’ny tambajotra serasera facebook fa misy andian’olona mitonona ho mpiasan’ny fahasalamana miaraka amin’ny fiara 4×4 sy mpitandro filaminana mitety sekoly ary manery ny mpianatra rehetra ao an-dakilasy hatao vaksiny miaro amin’ny pesta. Teny Ambohimangakely no niandoha ny resaka, ny talata, ary niitatra amin’ny fokontany maromaro: teny Ambohimanambola, olona nitonona ho ray aman-drenin’ny mpianatra amin’ny sekoly tsy miankina no niantso ny laharana maitso 910 mampilaza ny zava-misy. Nidina avy hatrany teny ifotony teny amin’ny toerana misy ilay sekoly ny ekipan’ny minisiteran’ny Fahasalamana ka hita fa tsy nitombina velively ilay antso ary tsy nahitana tranga hafahafa tao aminy.
Tsy nijanona teo fa nitombo ny isan’ny fokontany nisehoan’ilay fanakorontanana. Nisy eto Antananarivo Renivohitra, Atsimondrano sy Avaradrano fa mampitovy ny tsaho miely miseho any an-dakilasy avokoa ka mampisavoritaka ny mpianatra sy ny ray aman-dreny ary ny mpanabe. Tany Manjakandriana, tazan’ny mponina fa misy fiara mitondra olona manao fanamiana mpitandro filaminana sy manao aron’akanjo fotsy toy ny mpitsabo mihitsy mivezivezy eran’ny tanàna. Betsaka ny fahasimbana hita teny anivon’ny sekoly noho ny fisavoritahan’ny ray aman-dreny maika hamonjy ny zanany any an-tsekoly. Simba mihitsy ny vavahady ho an’ny EPP Ambatomaro, Anosibe, Ankadindramamy, CEG 64ha sy Antanimbarinandriana, omaly.
“Ny ankamaroan’ny antso azo ao amin’ny laharana maitso 910 mivoy io resaka vaksin’ny pesta atao any an-dakilasy io avokoa”, hoy ny tomponandraikitry ny seraseran’ny minisiteran’ny Fahasalamana, omaly. Amin’ny antso 1 000 voaray isan’andro, ny 50% manontany torohevitra momba ny pesta, ny 50% ambiny, milaza momba ilay vaksiny tao anatin’ny telo andro izao. Saika resaky ny rehetra ity tsaho ity teny an-dalamabe, anaty fitateram-bahoaka, amin’ny tambajotra serasera maro…
Nirodorodo naka ny zanany ny ray aman-dreny
Nisy fiantraikany tamin’ny fianarana ny tsaho, lasa nirohotra naka ny zanany tany an-dakilasy ny ray aman-dreny nefa tsy mbola ora firavana akory. “EPP maromaro ato anatin’ny Cisco Antananarivo Renivohitra no nitrangan’izay, vokany, nikatona ny sekoly fa lasa nody avokoa ny mpianatra”, hoy ny talen’ny serasera ao amin’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena, Tsitohara Serge, omaly. Manao antso amin’ny ray aman-dreny sy ny mpanabe ny tomponandraikitry ny minisitera mba tsy hihaino ny tsaho. Ny komity mpanara-maso ny fahasalamana sy ny toeram-panokanana ihany ny toromarika avy amin’ny minisiteran’ny Fanabeazana momba ny fisorohana ny pesta any an-dakilasy. Tokony manatona ny mpitandro filaminana akaiky raha mahita olona mitonona ho mpanao vaksiny izany, hoy ny fanazavan’ny tale ihany.. Efa nanao fanambarana mitovitovy avokoa ny minisiteran’ny Fahasalamana, ny minisiteran’ny Fanabeazana ary ny zandarmariam-pirenena.